Dowladda iyo Ahlusunna oo heshiis KMG ah ku kala saxiixday Guriceel “Akhriso+Dhageyso Qodobada” – Radio Muqdisho
Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa wasiirka Gaashaandhigga Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini oo waday dadaal ku saabsan sidii muwaafaqo looga gaari lahaa dagaalladii dhawaan ka dhacay halkaasi, ayaa wadahadal kadib maanta la kala saxiixday heshiis KMG ah oo lagu soo afjarayo colaaddaasi.
Qodobada heshiiska ay kala saxiixdeen Alsunna iyo dowladda federaalka ah ayaa ka kooban Shan qodob, oo kal ah.
1-Xabbad joojin rasmi ah,
2- in la kala qaado ciidamada muddo Afar maalin godohood ah.
3-in la furo wadahadal muddo toban maalin gudahood ah oo ka billaabaneysa 5-03-2015, si xal rasmi ah loo gaaro.
4- in labada ciidan ay ku kala ekaadaan Guriceel iyo Dhuusamareeb ayna joojiyaan gurmad ciidan, halkaasina waxaa ku cad in ciidamada dowladda ee ku sugan dugsiga tababarka Harqaboobe ee Guriceel la geyndoono Dhuusamareeb.
5- in dadkii ka barakacay magaalada dib loogu soo celiya guryahooda.
Heshiiskan waxaa u saxiixay dhinaca dowladda wasiirka Gaashindhigga Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini, halka Ahlusunna uu u saxiixay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ah ku simaha gudoomiyaha golaha fulinta Ahlusunna Sheekh C/risaaq Maxamed Cali Mire.
Goobta lagu saxiixayay heshiiskaasi waxaa goob joog ka ahaa odayaal dhaqameedyo, duubab iyo shaqsiyaad kale oo uu ka mid ahaa Jen. Maxamed Nuur Galaal.
Halkan hoose ka dhageyso qodobada heshiiska
Gudoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe oo maanta kormeeray mashaariic laga hirgelinayo Jowhar “Sawirro”
Gudoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe oo maanta kormeeray mashaariic laga hirgelinayo Jowhar "Sawirro"